Vanhu Voramba Kubhadhara Marezenisi eKuteerera ZBC kuNyanga
Zvita 22, 2010
Vagari vekuNyanga North mudunhu reManicaland vanoti vari kuramba kubhadhara mitero yemaredhiyo nematerevhizheni kuZimbabwe Broadcasting Corporation, kana kuti ZBC senzira yekunyunyuta nekusawana masaisai enhepfenyuro iyi.
Vagari ava vanoti havasi kukwanisa kubata masaisai eZBC, izvo zvava kuita kuti vararame nekuteerera kunhepfenyuro dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika dzakaita seStudio 7, SW Radio Africa pamwe neRadio Mozambique, kunyange hazvo vagari ava vachiti havanyatsonzwi mitauro yekuMozambique.
Vagari vekuBulawayo vakazivisawo mwedzi wapera kuti vacharamba kubhadhara mitero kuZBC sezvo vari kutadza nhepfenyuro iyi. Vagari ava vanoti vanotopona nekuteerera nhepfenyuro yemuSouth Africa, yeSABC.
Vanhu vakawanda munyika vanonzi havasi kubhadhara mitero yemaredhiyo nematerevhizheni avo vachiti ZBC haisi kuvapa zvinokodzerana nemari dzavo.
Mitero yemarhedhiyo emudzimba unonzi uri pamadhora makumi mashanu, kwotiwo wemotokari uri pamadhora zana pagore.
Kusabhadharwa kwemitero uku kunonzi kuri kurwadzawo ZBC, sezvo mitero iri imwe yenzira dzekuwana nadzo mari.
Mutemo unoti anenge atadza kubhadhra mutero anofanirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva, otongwa achipomerwa mhosva yekutyora mutemo weZBC Act.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi reZBC panyaya iyi. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari vekuBulawayo, reBulawayo Residents Association, VaRoderick Fayayo, vaudza Studio7 kuti nhengo dzavo hadzisati dzasangana nedambudziko rekusungwa pamusoro penyaya yemarezinesi iyi.
Mumiriri weNyanga North muparamende vachimirira MDC-T, VaDouglas Mwonzora, vaudza Studio7 kuti dunhu ravo rinonetsekawo kuwana mapepanhau ehurumende akaita seThe Herald neThe Sunday Mail nemamwe.